Ny tantarantsika - IntoKildare
Miezaha hahatsapa ny momba antsika rehetra amin'ny fahitana tantara manaitra avy any Kildare!
rehetra Uncategorized Community Kolontsaina Entertainment Tsiro an'i Kildare Stay fivavahana fiantsenana mpivady Events Family fifaninanana Krismasy Fáilte Ireland Zavatra tokony hatao Atsinanana Fahiny any Irlandy Ao an-trano Vaovao Fizahan-tany Kildare Tsy tokony ho hita Làlana sy diabe Turtle Bunbury
CommunityFizahan-tany KildareVaovaoZavatra tokony hataoNaas
Humans of Kildare - Ger avy any Bargetrip.ie
Lazao anay ny momba ny Barge Trip. Raha hamaritana azy fotsiny, ny Barge Trip dia hetsika mahafinaritra ho an'ny fianakaviana rehetra. Mety ho an’ny olona sivy volana ka hatramin’ny […]
CommunityVaovaoZavatra tokony hatao
Humans of Kildare - Ray avy any Lullymore
Lazao anay ny momba ny Lullymore Heritage Park Manintona mpitsidika iray andro any West Kildare, eo anelanelan'ny tanànan'i Rathangan sy Allenwood. Misarika ny mpitsidika an-trano izahay avy amin'ny lafivalin'i Irlandy ary […]
fivavahanaTsy tokony ho hitaTsiro an'i KildareZavatra tokony hatao
Toerana dite atoandro tsara indrindra any Kildare isaky ny teti-bola sy fotoana
Ny toerana fisotroana dite atoandro tsara indrindra ao Kildare isaky ny teti-bola sy fotoana hanaovana fividianana fehezan-teny malaza dia misy fotoana foana ny dite. Indrindra raha misy scone sy sandwich ao amin'ny […]
Ny fitsangatsanganana ankohonana 5 ankafizin'ny mpianakavy hankafizinao ao Kildare mandritra ny Herinandron'ny vakoka
Mandehana mitsangatsangana miaraka amin'ny zanakao! Miala amin'ny fahavaratra ny sekoly - ary mihalasa alahelo ny ankizy! Farafaharatsiny mba ho mandritra ny Herinandron'ny Vakoka Nasionaly izy ireo, miaraka amina laharana […]
mpivadyfivavahanaFizahan-tany KildareTsy tokony ho hitafiantsenanaStayZavatra tokony hatao
Fijanonana fahavaratra any Kildare
Spa, golf ary fivarotana mandra-pialanao làlana amin'ny fialamboly tonga lafatra any Kildare rehefa avy nandany ny ankamaroan'ny 18 volana lasa tao anaty fikatsoana trano, tao […]
KolontsainaEntertainmentEventsTsy tokony ho hitaZavatra tokony hataoKildare
Kildare Derby Festival 2021 - festival ho an'ny rehetra amin'ity volana Jona ity
Antony 5 hametrahana ny Fetiben'ny Kildare Derby amin'ny drafitra fahavaratra ataonao manomboka amin'ny olomasina mpiaro hatrany amin'ny kianja golf malaza eran-tany, County Kildare dia mitovy hevitra amin'ny zavatra maro. Saingy azo resahina, toy ny […]
June Fest Kildare 2021 - Ity no azonao antenaina
Kildare's June Fest no fetim-pianakaviana tonga lafatra amin'ny fahavaratra 2021 Miaraka amin'ny fiarahamonina miadana nefa azo antoka fa manokatra miaraka amin'ny fahatongavan'ny tara-pahazavana ilain'ny sasany, efa fahavaratra sahady ny fahavaratra 2021 […]
fivavahanaTsiro an'i Kildare
Ny fifanarahana fetin'ny reny tsara indrindra any Kildare
Fetin'ny reny dia amin'ity alahady ity- izay mbola manome fotoana anao hahazo izany fanomezana manokana izany ary amin'ity taona ity dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fahazoana tsara ny fanomezana anao! Na dia […]
Fanomezana ho an'ny mpifankatia malaza an'i Kildare 2021
Na dia tsy afaka mankalaza ny Andron'ny mpifankatia amin'ny heviny mahazatra aza isika amin'ity taona ity, misy fomba maro hanehoanao amin'ny olon-tianao ny fiahiahianao anao amin'ity taona ity! Into Kildare […]
KolontsainaEventsFáilte IrelandAtsinanana Fahiny any IrlandyNewbridge
Hill of Allen dia tonga 'Fanilon'ny fanantenana' ho an'ny Andron'i St. Brigid
Ho any Kildare hanomezam-boninahitra ny mpiaro azy ireo miaraka amin'ny Illumination Iconic
Miantso ny ankizy rehetra !! Mamorona Fifaninanana Miampita amin'ny Andron'ny St Brigid anao!
Ho fankalazana ny Andron'ny St Brigid amin'ny 1 febroary, manasa ny ankizy hamorona ny Lakroa St Brigid's Day izahay !!
fivavahanaEventsTsiro an'i Kildare
Mitondrà Chefs Kildare Top ho ao an-dakozanao amin'ity vanim-potoana ity!
Manasa anao i Taste of Kildare hanatevin-daharana ireo fampisehoana fandrahoan-tsakafo virtoaly miaraka amin'ireo chef malaza ao amin'ny firenena. Miaraha amin'i Chef Celebrity, Rachel Allen ary chef fanta-daza hafa amin'ny fankalazana fety ny vokatra tsara indrindra amin'ny vokatra Kildare sy lovia ara-potoana.
KrismasyfivavahanafiantsenanaTsiro an'i Kildare
Fanandramana ireo mpihaza fanomezana 'Foodie' an'i Kildare
Iza no tsy tia mandray hamper? Tsy ny feon'ny harona wicker na mamaha ny kofehin'ilay boaty fanomezana no tena mahasarika, fa ny mahita zava-tsarobidy […]
Zavatra tokony hataoLàlana sy diabeCelbridgeLeixlip
Araho ny dian'i Arthur Guinness amin'ity làlana 16km ity, raiso ireo toerana manan-tantara mifandraika amin'ireo labiera malaza any Irlandy - ny fianakavian'i Guinness. Zahao ny tanànan'i Celbridge […]
Kildare dia mankalaza ny herinandro virtoaly 'Virtual' Heritage 2020
Mba hankalazana ny Herinandron'ny Vakoka (ary miaraka amina famerana covid), ireo vondrona lova eo an-toerana, ny vondrom-piarahamonina ary ny mpahay tantara dia nilahatra andianà hetsika an-tserasera sy an-tserasera, mba hahafahanao mankafy ireo hetsika any ivelany na amin'ny fiononan'ny tranonao manokana !!
Fiantsoana hihetsika ity Andro iraisam-pirenena ho an'ny Bog ity
Ny Council Irish Conservation Peatland Conservation, fikambanana mpanao asa soa izay miasa mankany amin'ny fitehirizana ny ampahany solontenan'ny tantsaha irlandey hankafizan'ny olona anio sy amin'ny ho avy dia mitady ny FANAMPIANAO amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Bog.
Fitsipika momba ny fahasalamana sy fiarovana amin'ny antsipiriany avy any Fáilte Irlandy
Fáilte Irlandy dia namaritra ireo torolàlana mahasalama sy azo antoka amin'ny antsipirihany ao anatin'ny ivon-toeran'izy ireo vaovao. Azafady mba jereo eto ambany ireo torolàlana amin'ny antsipiriany.
Miverina amin'ny indostrian'ny hazakazaka ny orinasa mpitaingina Equine
Naas Racecourse dia nanambara fa ny mpitarika sakafo ara-tsakafo irlandey Plusvital dia iray amin'ireo orinasa indostrialy hiakatra sy hanohana ny indostrian'ny hazakazaka mandritra io fotoana sarotra io.
Kildare dia nandefa ny fampielezan-kevitra 'Mikarakara ao Kildare' izahay
Into Kildare dia nanao fanentanana natao hanomezana toky ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny mpitsidika fa ny orinasa manerana ny distrika dia nampihatra fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana sahaza.
Fáilte IrelandFizahan-tany Kildare
Fanohanana ara-barotra avy any Fáilte Irlandy
Fáilte Irlandy dia nanangana karazana fanohanana ara-barotra hanampiana ireo orinasa handrafitra ireo singa manan-danja amin'ny fanarenana azy ireo. Ireo dia novolavolaina niaraka tamin'ny manam-pahaizana momba ny indostria mba hanohanana ireo orinasa hanokatra indray sy handefa ny orinasan'izy ireo amin'ny fomba mahomby ary hameno ny torolàlana momba ny asa amin'ny fanokafana izay voatanisa etsy ambany ihany koa.
Fittest Family Irlandy 2020 - Misokatra ny fangatahana!
Fittest Family Irlandy 2020 - Misokatra ny fangatahana! Niverina ny Fittest Family Irlandy ary mitady fianakaviana ao Kildare izy ireo! Nahazo izay ilain'ny fianakavianao ve ianao […]
Mpikambana ao amin'ny Kilkea Castle Golf
Omaly dia nahita ny fanokafana miadana ny ampahany sasany amin'ny toekarentsika miaraka amin'ny golf ho iray amin'ireo fanatanjahantena vitsy an'isa navela hanomboka indray, eo ambanin'ny kaody hentitra mifandraika amin'ny Covid.
Ao an-tranoZavatra tokony hatao
Kildare dia trano fonenan'ireo harem-pirenena Irlanda ary eo am-piandrasana fatratra ny fotoana hahafahantsika mivoaka hizaha ireo tranombakoka mahafinaritra, zaridaina afovoan'ny mpitsidika, zaridaina ary zaridaina rehetra. Ankafizo ny fitsidihana virtoaly ary mahazo traikefa akaiky kokoa miaraka amin'ny fahalalana fanampiny avy amin'ny mpiasa mahay mitazona ireo fisarihana mpitsidika ireo ary mihazakazaka ao ambadiky ny varavarana mihidy.
Ao an-tranoCommunityfivavahanaTsiro an'i Kildare
Cook miaraka amin'i Kildare - Resipeo avy amin'ny manodidina ny County
Ireo trano fisakafoanana, kafe, fisotroana ary mpamokatra sakafo any Kildare dia miasa mafy manome ny olona hevitra momba ny fomba hitondrana ireo zavatra matsiro avy any amin'ny toeram-piorenany ao an-tranonao. Ny sasany amin'ireto resahina Kildare mahafinaritra ireto dia natambatra mba hanomezana anao fanandramana zavatra atolotra!